Soo dejisan Panda Antivirus 2015 15.0.1 Gold... – Vessoft
Soo dejisan Panda Antivirus
Eygan Adda – software a functional talagalay in lagu ogaado oo ay baabbi’iyaan fayraska. software The ilaaliya computer ka dhan ah fayraska, spyware, Trojans, Gooryaanka iyo hanjabaado kale. Eygan adda ayaa module ka dhisay-in in cidhiidhya carruurta ay helaan goobaha web dadka waaweyn. software wuxuu taageeraa technology ee macluumaad is-dhaafsiga furin dhexeeya dadka isticmaala in ay si toos ah u siyaadiyaa ammaanka kombiyuutarka. Eygan adda leeyahay filter ah anti-spam iyo suurtagalnimada of helaan fog.
Protection ka dhanka ah noocyo kala duwan oo hanjabaad
Cidhiidhyo carruurta ay helaan goobaha web dadka waaweyn
Skaanka aaladaha kaydinta xogta
Comments on Panda Antivirus:
Panda Antivirus Software la xiriira:
Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043
Antiviruses software The in la ogaado oo ka saar fayraska. software The kuu ogolaanayaa inaad baarista nidaamka noocyada kala duwan ee fayraska, spyware iyo hanjabaado kale.
العربية, English, Français, Español... Kaspersky 2016 16.0.0.614 Internet_multi_device, Total_security, Antivirus...
Antiviruses Mid ka mid ah antivirus keentay si loo ilaaliyo aad computer ka dhanka ah network iyo hanjabaad maxaliga ah. software waxay leedahay farsamooyinka casriga ah si loo ogaado dayacanka ah.
العربية, English, Français, Español... SUPERAntiSpyware 6.0.1228 Free Edition iyo Professional
Antiviruses Tool si aad u ilaaliso computer ka dhanka ah hanjabaad kala duwan. Software ayaa awood u tahay in la ogaado noocyada kala duwan ee fayraska oo la helo faylasha cudurka ee karantiil.
Avast 12.3.3154 Free Antivirus iyo Premier; 12.1.3076 beta Internet Security...
Antiviruses The antivirus caanka ku ah ilaalinta nidaamka ka dhanka ah noocyada kala duwan ee hanjabaad. software waa ay awoodaan in ay ku kaydiso passwords user ee ammaanka iyo ilaalinta network guriga ka dhanka ah spyware ah.
العربية, English, Français, Español... AVG 2015 build 5577 Free, AntiVirus iyo Internet
Antiviruses qalab The si ay u difaacaan fayraska, spyware iyo rootkits. software wuxuu bixiyaa joogtid ammaan ah ee internet-ka iyo hubinayaa gaadiidka ee khatar gelin kara.
English, Français, Español, Deutsch... AdwCleaner 6.030
Antiviruses Ayna System Agabka inay dalka baadhaan oo ka saar modules adware ah. software The baaritaanku habka iyo wax ku ool ah ka saaraysaa toolbars, unugyada ad iyo ballaadhinta loo baahnayn.
360 Total Security 8.8.0.1080
Antiviruses Software antivirus lagu kalsoonaan karo oo la haysto tiknoolijiyad casri ah si loo xaqiijiyo badbaadinta dhamaystiran oo nidaamka. Sidoo kale software ka taageertaa kala duwan oo qalab dheeraad ah si aad u nadiifiso iyo tayadoodii nidaamka.
English, Español, Deutsch, 中文... Dr.Web 11.0.0.11162
Antiviruses Agabka in la ogaado oo ka saar fayrusyada iyo TROJAN. software wuxuu kuu ogol yahay in lagu daaweeyo faylasha cudurka ama ku rid karantiil.
English, Українська, Français, Español... ComboFix 16.10.17.1
Antiviruses Habka ugu haboon tahay in la helo iyo tirtirto xogta khatar ah. Adda ogaadaa khatarta ugu badan ee nidaamka iyo iyaga bandhigayaa in warbixin faahfaahsan.
Spybot - Search iyo Destroy 2.4.40.0
Antiviruses Agabka in la spyware ka qaban. Software ayaa awood u si ay u qabtaan falanqaynta faahfaahsan nidaamka iyo xakameeyo habka bilaabo boot.
English, Français, Deutsch, Italiano... One Click Root 1
Phone Software in la siiyo xuquuqda Root in qalabka Android. Sidoo kale waxa ay taageertaa update ee wadayaasha iyo hoos u Xamuulka ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee qalabka.
Antiviruses software The in la ogaado oo la joojiyo nidaamka shaqada ee furin, in lmahu howlgalka dhamaystiran oo antivirus ugu weyn.
Saxannada Utility ayaa si ay u abuuraan images disk la taageero of qaabab kala duwan. Software ayaa awood u siineysaa inay ku gubtaan xog ku saabsan disk ah oo garab difaac nuqul ah.
العربية, English, Українська, Français... Remote Mouse 3.002
Helitaanka Remote Phone software ah ee ay gacanta ku fog of computer adigoo isticmaalaya Android, macruufka iyo Windows Phone qalabka. software The buuxda waa simulates hawlaha mouse iyo keyboard.
Snagit 12.4.1.3036 iyo 11.2.1.73
Qabashada Screen Agabka in la abuuro screenshots iyo diiwaan qaybaha kala gooni ah ee shaashadda kombiyuutarka. Sidoo kale software ka kooban editor ka dhisay-in si sanamyadooda iyo saamaynta shaqeeyaan.
English, Français, Deutsch, 日本語
Mozilla Firefox 49.0.1 iyo 50.0b6 rc 1
WinRAR 5.40 beta
Virtual DJ 8.2.3440 iyo 7.4.7
Internet Explorer 11, 10 iyo 9